Bayanda izinkanyezi show ibhizinisi laqala ukusetshenziswa emikhosini kanye fashion imibukiso ngendlela engavamile - ngezinwele zakhe pink. Ngale ndlela waqala isahluko esisha fashion. Ngokwesibonelo, ngemva ukubukeka Lady Gaga e iwigi pink, lo mkhuba waqala ukusakaza ngokushesha. Ngubani intombazane nezinwele pink - ukuthi akusi ukushaqeka, kodwa nje isitayela yokuqala. Kodwa manje, le umbala izinwele lezimanga abanye.
Caveat kuphela: lombala alulona olwawo wonke umuntu. Kuhle in pink blondes repainted, kanti uma unanoma izinwele ezimnyama, uzodinga ukuba kubakhanyele phambi imidwebo.
Umbala kwaba mnene, ngokulinganayo walala phezu izinwele, kungcono ukuba baphendukele ochwepheshe salon ubuhle. An abanolwazi wezinwele izinga ngeke upende izinwele zakho.
Kungenzeka futhi kanye repainted e color pink bebodwa. Udinga ukwenza ukuthola esitolo lapho ukuthengisa pink izinwele wemvelo, ukuthola konke kulungile bese uzama. hhayi emakethe manje kunzima ukuthola amathuluzi ukudaya izinwele, ukukhetha likhulu kakhulu, kanye shades of imibala.
Ukuze wenze izinwele pink, kudingeka ukulungiselela kusengaphambili izinto ezinjalo:
- clarifier izinwele ;
- pink izinwele wemvelo.
Uma ufuna ukuzama, uma umthunzi oyifunayo izovuleka nezinwele ezinde yakho, okokuqala ukupenda imicu. Kufanele kwenziwe ukulandelana elandelayo:
- Nigqoke Strand ucwecwe izinwele. Sebenzisa brightener, zihambisana ucwecwe Strand bese ulinda isikhathi esifanele.
- Geza nge imoto bese sula Strand.
- Sebenzisa kuze kube semikhawulweni upende, zihambisana ucwecwe.
- Emva kwesikhathi oyifunayo ukugeza imoto bese sula Strand.
Uma uqinisekile ukuthi ufuna ukupenda lonke ikhanda pink, okokuqala udinga ukuthi ekhanyisa izinwele zakho ngokuvumelana imiyalelo Emimoya. Thunzi ukuxegiselwa phandle, aba maningi namathuba okuba ukuthi umbala pink izinwele zakho kunjalo sibonisani kwi isembozo. Ngemva kwalokho, sula kubo futhi sisebenzise hairdryer udayi pink, lapho kungekho ammonia noma toning mousse. Ngemva yokudweba udinga ulinde amaminithi 30, futhi pink yakho izinwele ngomumo.
Uma unokungabaza yini noma cha yokudaya izinwele ungaphakathi umbala ezinjalo nokuba sithole ukuthi kulungile kuwe, uthole ink okhethekile wokuqala. Futhi kuphela ke, uma uthanda yalokho, uqhubeke ukushintsha isithombe.
Indlela enhle ukuhlola uma nobuso pink izinwele izinhlelo ezikhethekile kuyi-Internet ukuze ukukhethwa zezinwele nemibala izinwele. Ukuze wenze lokhu, kufanele thwebula uhlelo isithombe sakho futhi kalula ukhetha umbala oyifunayo. Ngenxa intombazane isheke enjalo enquma ukushintsha noma imiqondo yabo ukushintsha okuthile izinwele zakho.
izinwele Pink, akungabazeki, yindlela engavamile ugqame. Uma umuntu ongavamile, futhi ngempumelelo, ngeke kube nzima ukuze kungabonakali kule uhlobo umbala, kungakhathaliseki ukuthi. Lokhu kuthambekela manje futhi onesikhundla ehola, ngakho ungazama. Kungenzeka nge inani elincane isikhathi kuyoba izinwele pink akuyona imfashini, futhi sithuthe kungaba asihlobene kakhulu. Ngakho kudingeka kusimangaze abantu nokushintsha, futhi indlela yokukwenza - kukhethwa kuwo wonke umuntu.
Izitayela zezinwele ze-hippies: ifa le "izingane zezimbali" zobuciko bezinwele zanamuhla
Zezinwele imfashini kanye amahle for girls esikoleni
Yenkomo Bestrogany isitayela Italian
Indlela ukupheka pepper eyayigcwele: Amathiphu wekhaya
Isisusa ingenye yezingxenye yizenzo zabantu